Kheyre ” Jidka waa kula soo aragnay maaha mid qurxoon” | allsanaag
Kheyre ” Jidka waa kula soo aragnay maaha mid qurxoon”
Ri’sul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxa garab taagan wasiirkii dhalinyarada iyo Ciyaaraha Soomaaliya Khadiijo Diiriye oo aad ugu sacab tumaysa marka uu raisul wasaarahu sheegay inuu soo arkay jid qurxoon oo ay Soomaali u socoto.
Jidkaa Qurxooni ee Soomaali u socoto, ee uu Raisul wasaaruhu sheegay ayaa ah, in wax kasta oo lagu helo magac Soomaaliyeed la geliyo magaalada Muqdisho, laga shaqaalaysiiyaa Bulshada Muqdisho laga soo xulaa Shacabka Muqdisho.
Hoos ka daawo Ciyaartooy looga soo xulay qaab qabiil magaalada Muqdisho oo Ciyaaro uga qayb galay caalamka , iyaga oo ku qaraabanaya magaca Soomaaliyeed. Iyo in ay Somali oo dhan ay wada metelaan, Hadaba haddii aad ka soo jeedo Baargaal, Baaraha qoL, Burtinle, Buuhoole iyo Baardheere, marka aad muuqaalkan daawato Soomaali ma kula tahay in Soomaali meel qurxoon u socoto mise magacii Soomaaliyeed ayaa la ceebaysanayaa iyada oo qabiil iyo degaan gaar ah loo adeegayo
Ugu danbayntii Mudane Raisulwasaare jidkan aad niyadda ku hayso waa soo aragnay oo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Culusoow ayaa na soo tusay, mana ahayn jid qurxoon. Umadda Soomaaliyeed waxay ka codsanayaan magaca Soomaaliyeed wixii lagu helay haddii ay Muqdisho soo dhaafi waayeen bal yaan magaca Soomaaliyeed Caalmka lagu ceebayn oo marka danbe oo aad koox ciyaartooy ah dirayso magac kale sii qaata!.
← Jidkii Ceerigaabi iyo Burco oo istaagay ka dib markii dhaqale loo waayey Amitabh Bachchan oo 75 jirsaday →